Izixhobo zeBel Belay zokuHamba kunye noLonwabo | Iinkqubo eziLungileyo zokuHamba
Bhalisa Isixhobo sakho
Ukuqhutywa ngokuthe ngqo
Fumana umthengisi kwakhona
Malunga ne-Auto Belays
Inkonzo kunye noKwenziwa ngokutsha
Uyilo olwahlukileyo lwe-DUPLEX SPRING
Ukurhoxiswa okungafunekiyo kuyilelwe ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide
Umbaleki wePD® uSean McColl wabelana ngebali lakhe leOlimpiki
Ukufikelela kumgangatho ophezulu ukuvavanya kunye nokuqinisekiswa
Dibana neqabane lakho elitsha elinyukayo
Ukuhla okugqibeleleyo kwe-Auto Belays yakhiwe ngesandla e-USA kwaye iqinisekisiwe ikowona mgangatho uphakamileyo emhlabeni. Inomfanekiso wealuminiyam kunye necala elingaphandle lesinyithi ukukhusela ngokuchanekileyo ukunxiba izinto zangaphakathi. Ukwakhiwa okungahambi kakuhle kunye nokuqina, ukuthembeka, kunye neendleko eziphantsi kobunini zizizathu nje ezimbalwa zokuba kutheni iPD ® yeyona ndawo ikhethwayo ekunyukeni iindawo zokuzilolonga, iinkampu, izikolo kunye neeyunivesithi, kwizifundo ezinemiqobo ye-ninja, nakumaziko olonwabo osapho. Ukuvavanywa nokuqinisekiswa kwi-10x EN 341: 2011 Class A., ezimele ezona mfuno zibanzi zokuzonwabisa ngezixhobo ze-auto belay.
Uvavanywe kwi-10x EN 341: 2011 Class A kwaye ibonisa i-aluminium eyomeleleyo kunye nentsimbi engenacholo ngaphandle ngokuchaneka kwezinto zokunxiba ngaphakathi.
Ukurhoxiswa okungafunekiyo okubandakanya iPD® ekhethekileyo eDuplex Spring Design ™ yenzelwe ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide.
Kulula ukunyuka, ukuhamba, nokulawula ukuphakama kunye nexabiso eliphantsi lokuthumela ngenkonzo kunye nokwenziwa ngokutsha.
Ixabiso eliphantsi lobunini
Ixabiso lokungena, imali ephantsi yokuphinda ubhengezwe, akukho zindleko zeenkonzo zifihliweyo, kunye nezinto ezihlala ixesha elide zithetha ukonga imali kubaninizo.
Isetyenziswe ngamaqela kunye neembaleki eziphambili kwihlabathi liphela kunye ne-auto belay yokuqala esetyenzisiweyo kukhuphiswano lweNdebe yeHlabathi, ekhokelela kwinkqubela phambili ebalulekileyo kukhuphiswano lokhuseleko kunye nokulingana.
UKUSETYENZISWA NGAPHAKATHI NOKUSETYENZISWA KWANGAPHANDLE
Izinto ezinganyangekiyo umhlwa kunye nezindlu ezitywiniweyo zomsebenzi obalaseleyo ngaphakathi nangaphandle.
Ukwakha eyona auto belay
Inkokeli yamaxabiso kumgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu kweebhendi zemoto.
Ukurhoxisa kwinqanaba elingu-2ft (61cm) ngomzuzwana, kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhwela ngokubanzi, iindlela zokufudumala, izitishi zokunyuka kwabantwana, kunye nokunyuka komnyhadala.
Ifaka i-Duplex Spring Design ekhethekileyo yethu yenzelwe ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide.
Itywinwe ngokupheleleyo ukuze isetyenziselwe ngaphakathi nangaphandle.
Isantya seDrive ™
I-original auto-retracting auto belay ibeka umgangatho womgangatho kunye nokusebenza.
Ukurhoxa kumbane okhawulezayo nge-15ft (4.6m) ngomzuzwana, iSpeed ​​Drive ™ ilungele ukunyuka kwesantya kunye nokhuphiswano, iindlela eziguqukayo, uqeqesho lwexeshana, kunye neendlela zomzimba kunye neesekethe.
I-Auto Belay esemthethweni ye-IFSC yeNdebe yeHlabathi yokuKhwela kunye nokubonelela ngokukodwa kwiDuplex Spring Design ™.
Khetha i-Lanyard yakho
I-PD® Auto Belays ibonelela ngobude bemisonto emithathu eyilelweyo yokwandisa ukusebenza kwe-auto belay ngokusekwe ekuphakameni. Soloko ukhetha i-lanyard ehambelana ngokusondeleyo nokuphakama okucetywayo ngokulingana okanye ubude obukhulu.
Ukuphakama kokuphakama phakathi kwe-18ft kunye ne-28.5ft (5.5m kunye ne-8.7m)
Ukuphakama kokuphakama phakathi kwe-26ft kunye ne-40.5ft (8m kunye ne-12.3m)
Ukuphakama kokuphakama phakathi kwe-34ft kunye ne-53.5ft (10.4m kunye ne-16.3m)
Khetha indlela onxibelelana ngayo
I-alloy yensimbi, isigaba se-3 sokukhiya i-carabiner ene-swivel edibeneyo
I-aluminium ene-Anodized, i-3-sigaba sokuvala i-carabiner ene-swivel edibeneyo
Ezimbini, izigaba ezithathu zokutshixa ii-carabiners ezinamathambo enja athungwayo kunye nokujikeleza okuhlangeneyo
Amandla apheleleyo athungwe iluphu elungele ukusetyenziswa neentlobo zonxibelelwano ezigunyazisiweyo
Umgangatho weNkwenkwezi ezintlanu
Ithandwa ziimbaleki, abanini bamashishini, kunye nabantu abathanda ukunyuka
Imveliso enkulu nokuba liqela lenkxaso elingcono
Imveliso enkulu nokuba liqela lenkxaso elingcono "Ukuhla okugqibeleleyo kweZithuthi ezizenzekelayo zihlala zihlangabezana neemfuno zam kwaye abasebenzi beArial Adventure baye baba luncedo kwaye banolwazi rhoqo xa ndifuna inkxaso yabathengi." UNowa B. nge-19 Agasti 2020
UNowa B. nge-19 ka-Agasti ka-2020
Ukuhla okugqibeleleyo kuya kwenza ukuhla kwakho kugqibelele
Umgangatho oPhezulu oPhezulu oFumanekayo. Cebisa kakhulu.
Ukuhamba ngokuzenzekelayo 2.0
Le yi-auto belay yekamva. Siyayithanda imveliso.
Ukusetyenziswa kakhulu kuyo nayiphi na indawo yokunyusa umthambo!
Isixhobo esimangalisayo kunye nokusetyenziswa ngokugudileyo.
Le auto belay yeyodonga lweenyawo ezingama-22 kwaye isebenza kakuhle. Akusekho mntu ufuna umntu ondithobayo! Iziva ikhuselekile kwaye ithembekile kwaye kwakulula ukuyicwangcisela iinjongo zam. Ndithenge owesi-2 kwenye indawo yodonga lwam!
Steve W. ngoJanuwari 28, 2020
Yilawule iNkqubo yakho yoLawulo lweBay Belay
Ubhaliso lweMveliso yinxalenye ebalulekileyo yolawulo lwe-auto belay kwaye iseka irekhodi kwangethuba nangokuchanekileyo elisetyenziswe kubomi benkonzo yesixhobo. Yiba ngowokuqala ukufumana i-beta ebalulekileyo malunga nokuhlaziywa kwemveliso, iindaba kunye neziganeko, iibhulethini zobuchwephesha, kunye nezibonelelo ezizodwa.
Fikelela kuluhlu lwethu olupheleleyo lwemveliso yolwimi lwesiNgesi nolwangaphandle kunye neencwadana zokusebenza. Khuphela olona xwebhu lwangoku lweemodeli ezingama-220 kunye ne-230 ze-auto belays, i-duplex spring ™ yokuhlola kunye neencwadana zokubuyisela i-lanyard, ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane, kunye nokunye.
Fumana uninzi lwenkqubo yakho yolawulo yePD® ngolwazi oluchanekileyo nolunzulu malunga nokufakwa, ukhathalelo kunye nokusebenza. Jonga izicwangciso eziqhelekileyo zokusombulula iingxaki, funda kwiimfuno zovavanyo lomenzi, kwaye ufumane izikhokelo zokulawula ukhuphiswano lweebhendi ezizenzekelayo.
IMigangatho ye-EN isete umqobo wokhuseleko lwemveliso, ukuthembeka kunye nomgangatho. I-Perfect Descent Auto Belays ivavanyiwe kwaye yaqinisekiswa kwelona nqanaba liphezulu leendawo zokuzonwabisa zemoto kwi-10x EN 341: 2011 Class A. Jonga kwaye ukhuphele esona siBhengezo sokuVumelana kunye neSatifikethi seMviwo.
Izikhokelo zeMveliso eziNqabileyo ezigqibeleleyo
© 2021 Iinkqubo eziLungileyo zokuHamba. Onke Amalungelo Agciniwe.